पोषणविद मनसालाई प्रश्नः तरुल, चाकु खानुको फाइदाहरु के–के छन्? कसले खानु हुँदैन? (भिडियो) :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
पोषणविद मनसालाई प्रश्नः तरुल, चाकु खानुको फाइदाहरु के–के छन्? कसले खानु हुँदैन? (भिडियो)
तिलको लड्डु, चाकु, तरुल सबैले खान मिल्छ? कति खाने?
कमला गुरुङ शनिबार, माघ १, २०७८, ०६:१०:००
काठमाडौं- मकर संक्रान्तिमा तरुल, तिलको लड्डु, सखरखण्ड र चाकु खाने प्रचलन छ। चिसो मौसममा यी खानेकुराहरुले शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने पोषणविद् बताउँछन्।
तरुल र सखरखण्डमा पाइने फाइबर, भिटामिन र मिनरल्सले शरीरलाई फाइदा गर्ने पोषणविद् प्राडा मनसा थापा ठकुराठी बताउँछिन्। साथै यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन समेत मद्दत गर्ने उनले बताइन्। तर यी खानेकुराहरु शरीरको आवश्यकता र मात्रा मिलाएर मात्र खानुपर्ने उनको सुझाव छ।
मकर संक्रान्तिमा तरुल, चाकु खानुको फाइदाहरु के के छन्? कसले खानु हुँदैन? लगायत विषयमा डा ठकुराठीसँग हामीले थप कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
मकर संक्रान्तिमा तरुल, चाकु खानुको फाइदाहरु के के छन्?
– मकर संक्रान्तिमा तरुल, घ्यु, चाकु, तिलको लड्डुको खानु स्वास्थ्यका निम्ति फाइदाजनक छ।
– चिसोमा यी खानेकुराहरु खाँदा शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्नुका साथै तातो बनाउँछ।
– शरीरलाई आवश्यक पर्ने फाइबर, विभिन्न भिटामिनहरु यसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यी खानेहरुको मात्रा कसरी निर्धारण गर्ने ? कति खान आवश्यक छ?
– चाडपर्व भन्ने बित्तिकै अनियन्त्रित मात्रामा खानु हुँदैन।
– अत्याधिक मात्रामा खाने कुनै पनि खानेकुराले शरीरलाई राम्रो गर्दैन।
– शरीरको आवश्यकता अनुसार मात्रा मिलाएर खानुपर्दछ।
– दीर्घकालीन रुपमा यसले त्यस्तो असर नगरेपनि तत्काल भने अपच हुने, पेट दुख्ने, वान्ता हुने जस्ता समस्या देखापर्दछ।
तरुल, तिलको लड्डु र चाकु एकै पटक धेरै बनाएर भण्डारण गरेर राख्नु कतिको ठिक हो ?
– तिलको लड्डु बनाएर महिना दिनसम्म राख्दा बिग्रिदैन।
– चाकु, तिलको लड्डु भण्डारण गरेर पनि खान मिल्छ।
– तर तरुल, सखरखण्ड धेरै दिनसम्म राख्न मिल्दैन।
– उसिनेर पकाइने हुँदा तरुल, सखरखण्ड एक या दुई दिनभन्दा बढी राख्न मिल्दैन।
तिलको लड्डु, चाकु, तरुल सबैले खान मिल्छ ?
– यी खानेकुराहरु स्वास्थ्यका हिसाबले वैज्ञानिक तरिकाले मिलाइएको छ।
– तिलको लड्डु सबैले खान मिल्छ। तिलमा स्वस्थकर चिल्लो पदार्थ हुन्छ।
– सख्खरको गुलियो राम्रो भएपनि सबैले खान मिल्दैन।
– मधुमेह, मिर्गौलाका रोगीहरुले सख्खर खानु हुँदैन।
– मुधमेहका बिरामीले चिनीमा जस्तै सख्खरको गुलियोमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
– स्वस्थकर व्यक्तिले भने चिनीको सट्टा सख्खर खानु राम्रो हुन्छ।